Weligaa mala yaabtay waxa YouTube Meme yahay? Si aad uga dhigto cad, aynu hore u aragtid waxa meme, meme internet iyo sidoo kale meme YouTube yihiin.
Waa Maxay a 'Meme'?
A "meme" waa virally kala qaado calaamad dhaqanka, style ama fikrad bulshada. meme A dhaqmo sida hargabka ama fayras, wuxuu ku fidaa iyadoo qof qof kale si degdeg ah, laakiin gudbinta fikrad halkii nooc ka mid ah nolosha.
Sanadkii 1976, Richard Dawkins, nin cilmiga nafleyda barta ah evolutionary ugu horeysay soo bandhigay erayga "Meme" in uu buugga "The Xasad Gene". Erayga "Meme" oo ka soo jeeda erayga "mimema" Greek ka dhigan tahay "wax Keeban".
Waa maxay 'Internet Meme'?
An meme Internet waa fikrad, style, dhaqanka ama tallaabo oo si deg deg ah ku fidaa internetka, inta badan sida Koshik la iska dhigida fikradda.
Meme Internet noqon kartaa video, image, HyperLink, sawirka ama website. Waxaa xitaa xaq ugu noqon karaa weedh ama eray, oo ay ku jiraan goorna ah ula kac ah. Dhaqdhaqaaqa noocaas ahi waxay horseedaan in ay ku faafaan qof ka qof via blogs, shabakadaha bulshada (sida Facebook, Twitter iwm), e-mail ama news ilo.
YouTube waa mid ka mid ah goobaha video qaybsiga ugu caansan adduunka. Ma aha la yaab leh in, Oo waxaa ka buuxa kala duwan oo hal abuur leh, funny, la yaab leh ama ka gubanayn video clips. Inta badan oo ka mid ah sidaas ma aha weyn, laakiin helaan malaayiin views isbuucyadii iyo gaaro xaaladda meme internet. Taasi waa meme YouTube.
Top 30 YouTube memes ee waqtiga oo dhan
In this article waxaad ka heli doontaa ugu sareeya 30 Youtube memes ugu caansan ay ka mid yihiin kuwa ugu fiican oo heer sare ah iyo sidoo kale cusub ee YouTube.
# 1. Ylvis: Waa maxay ma Fox waxaad dhahdaa ka?
"Waa maxay codka ha Dawacooyinku sameeyo?" Su'aal weydiiyo by Ylvis, labada ciyaaryahan ah majaajilada iyo music Norway. Sure in, ay kaliya ma bixiso jawaabta, laakiin waxa ay soo bandhigaan via video qoob ka ciyaarka ah oo uu u tegey inuu soo viral in dhawaan. Meme Tani waxay noqon kartaa cusub "Gangnam Style" music video.
Sababta oo ah caanka: hees dareen la'aan waa in sidaas la qabatimo
# 2. Gangnam Style, by Cent Psy
Gangnam Style ayaa, song pop ah, waa mid ka mid ah video ugu jeclaa ee taariikhda Youtube. Heesta oo la sii daayay ay Psy, heesaa ah South Korea, bishii July, 2012. In this video, Psy qabtaan qaab qoob funny. The "Gangnam Style" laftiisa waa parody ah oo qof ayaa fikrado la Gobolka Gangnam gudaha magaalada Seoul.
Sababta oo ah caanka: Wixii hanti 560 style
# 3. Rainbow Double ayaa
Rainbows Double sidoo kale status of meme gaaray. Paul Vasquez uploaded video ah qaansoroobaad double Buuraha Yosemite iyo dadka, awelna loola uu Youtube page in uu ka tago comments.
Sababta oo ah caanka: Sida qurux dabiici ah
# 4. Qof Rickroll
Waa meme prankster ah. Dadka sheegan doono inuu soo diro xiriir ganacsi oo muhiim ah in email, laakiin waxay u diraya links ee Rick Astley music video ka 1980.
Sababta oo ah caanka: Prankster video .
# 5. Romance xun, by Lady Gaga
Tani waa mid ka mid ah Youtube video ugu daawaday ee waqtiga oo dhan. Waxay leeyihiin in ka badan 455 milyan oo views. Song Tani video by Lady Gaga waxa lagu lamaaneeyey qaar ka mid ah dharka quruxda badan, iyo dhaqaaqdo hypnotizing qoob.
Sababta oo ah caanka: Wixii dharka quruxda badan, iyo dhaqaaqdo hypnotizing qoob ka ciyaarka .
# 6. Mr. Rogers Remixed: Garden of Your Mind
Mr. Fred Rogers ahaa saamayn malaayiin dhalinyarada. Uu PBS (Public Broadcasting System) show dedejisaa cajiib sayniska, dhaqamada iyo rajo dhab ah mustaqbalka.
Waxaa jira farqi u dhexeeya meme kale waa in, t uu video waa fareeshka ah maskax iyo non.
Sababta oo ah caanka: fekeray, fareeshka ah non iyo video waxbarasho .
NONONO Cat waa bisad la jecel dheer lehba ka Russia. In this video, wuu ka baqay arkaya ilmo yar. Markaasuu wuxuu bilaabaa inuu ku hadlo sida English, soo noqnoqda, erayga "No" dhowr jeer. Waa mid ka mid ah video ah meme badan jeclaa, gaar ahaan kuwii ku caashaqi jiray xoolaha.
Sababta oo ah caanka: jirrada xayawaanka.
# 8. OK, Tag! The White laabatooyinka Music Video
"OK, Tag" koox music internet, waa qof ku taqasustay wadaaga ay music dhex xardheen oddball. Tani waa meme la jeclaysto video eyda. Kuwii ku caashaqi jiray xoolaha ayaa ku farxsanahay meme this!
Sababta oo ah caanka: jecel xayawaanka.
Dibinta syncing + pop music Moldova + cajiib ah 560 = hit viral dagdag ah. Taasi waxay ahayd run, waayo, video Numa Numa. Gary Brolsma, xidiga ka mid ah meme Numa Numa, ayaa ku guuleystay qalbiyada daawadayaasha. Waxa uu entertains daawadayaasha tagayaan uu heesta "Dragostea".
Sababta oo ah caanka: syncing Dibno, music pop Moldova, cajiib ah 560
Sannadkii 2003, Star Wars Kid ahaa uploaded ee Youtube. In this video, arday ku jira dugsiga sare ee Kanada naftiisa laga duubay sarkaal ay kubada golf. Fasalka uu uploaded video in ay internet-ka, ka dibna wuxuu lahaa inuu u dhaqaaqo oo badala magiciisa in laga takhaluso ka dhibaatayn joogto ah. In kastoo, video leeyihiin dhamaad ku faraxsanahay.
Sababta oo ah caanka: Tusaale of fame internet tageen xumaan kara.
# 11. David dib markii ilkaha
David waa wiil 7 sano jir ah oo kaliya uu meesha ka saaray in uu ilig. Ka dib markii ay ka soo kabsaday suuxinta guud, uu gebi ahaanba qasan. Uu khadadka funny sida "Ma nolosha adduunyo dhab ah?" Waxa uu ahaa ugu caansan. Sanadkii 2009, this video ugu daawaday video 2aad ee YouTube.
Sababta oo ah caanka: Wixii su'aalo ah oo ku saabsan nolosha iyo xaalada uu daawo.
Evolution of Dance, by majaajiliiste Judson Laipply, waa mid ka mid ah ugu viral YouTube video. Waa 6 daqiiqo video ka kooban yahay 12 songs qoob ka caan ka ah 1956 2000. Waxaa si uu helay in ka badan 70 milyan oo views 8 bilood ah gudahood laga bilaabo uploaded 2006.
Sababta oo ah caanka: video Tani waa ogaado sida loo spoof Hababka badan dhaqaaqo dhabta ah ee qarniyadii 20aad iyo 21aad.
# 13. Onyxia weerar: 'dhibco More'
Tani waa hiwaayadda video duubo of World ah gamer Warcraft oo hogaaminaya kooxda si ay u weeraraan masduulaa weyn 'Onyxia'. Ayaa la shaqayn jiray hoggaamiye weerar Romania keenaysaa bulshada ah oo lagu magacaabo 'masax Club ee World of Warcraft.
Sababta oo ah caanka: Popular in kulanka dadka jecel.
# 14. Achmed Argagixisada dhintay
Iyada oo ah curiyaha comedy this, Ventriloquist Jeff Dunham waxa uu ku guulaystay warkiisiina caalamiga ah. Waxa uu parodies argagixisada iyo maamushaa si Quluubta daawadayaasha ku guuleysto oo ay la socdaan saaxiibkiis Achmed.
Sababta oo ah caanka: curiyaha Comedy
# 15. Kid Jarmal careysan
Tani waa run ahaantii video ah oo dhalinyara ah ka cabanaya cadho aad u xun iyadoo ciyaaro tartanka dhalanteed.
Sababta oo ah caanka: da'da yar qaba cadho.
# 16. Charlie Me yara!
Tani waa Youtube video caan ah oo qosol badan uploaded 2007 video Tani waxay muujinaysaa in, laba walaalo ah, Harry iyo Charlie, halkaas oo Charlie qaniinay farta walaalkiis oday ee.
Sababta oo ah caanka: jacaylka u dhexeeya walaalaha.
# 17. Jizz In surwaal My
Tani waa video ka Saturday Night Live iyo Kooxda music kelida ah Island. Waa hees ku saabsan qoob ka mowduuca galmada lab ah.
Sababta oo ah caanka: song Dance ah oo ku saabsan mowduuca galmada lab.
# 18. Riwaayado Chipmunk
Tani waa video gaaban hiwaayadda ee jiirka ah samaynta dhaqdhaqaajinta jirka. Haddii aad tahay qof xayawaanka jacel, waxaa laga yaabaa inaad jeceshahay this.
Sababta oo ah caanka: Wixii Love xoolaha.
# 19 Trololo Man
Trololo song waxaa sidoo kale mararka qaar loo yaqaan Rickroll Ruushka. Just in muddo bil ah waxa uu helay in ka badan 3 milyan oo views iyo remixes fara badan ayaa la sameeyey.
Eduard Khil, oo gabayaa ahaa Russian, ku dhashay 1934, wax fikrad ah kama dib markii 40 sano gabaygiisa noqon lahaa sidaas oo caan ah.
Sababta oo ah caanka: lyrics ee ay ahayd in uu yaraaday su'aal
# 20. Sariirta tuugu Song
Antoine Dodson, wiil 24 sano jir ah, ayaa wareysi uu siiyay telefishanka maxalliga ah oo ku saabsan galidda guriga iyo isku dayeen kufsi ah walaashiis. Wareysi laftiisu ahaa Hindida ah u cunijirin ilaa xad, laakiin remix by Brothers Gregory u yeedhay Bed tuugu song waxa ay sii caan ah.
Sababta oo ah caanka: jeelyihiin in wareysi cajiib ah.
# 21. Roobka Chocolate
Waa song by Tay Zonday in la uploaded in Youtube on 2007 oo si degdeg ah gaaray xaaladda web dareen. Sida memes kale internet, remixes badan oo roob Chocolate la sameeyey.
Sababta oo ah caanka: qosol song.
# 22. Qoob Baby
Absolutely, waa mid ka mid ah da'da weyn video memes ee waqtiga oo dhan. In 1996, Baby ka cayaar (Baby Cha-Cha) sii daayay oo ahaa animation a 3D. Ilmuhu wuxuu xitaa muuqday Ally McBeal ah, riwaayadaha ah sharciga loo jecel yahay.
Oo xiiso leh, ma jirin Facebook, twitter ama shabakadaha kale ee bulshada xitaa Google si ay u faafiyaan this video. Waxaa ku dhowaad dhammaan samayn via email.
Sababta oo ah caanka: Animation iyo qoob hanti.
# 23. Tani waa Sparta!
Waa meme ah waxyiga naxariis lahayn iyo riwaayado filim 300 taas oo King Leonidas, King Spartan ee khadka qeyliyo hor dilay Faarisi ah.
Marar badan meme tan wax laga badalay. A "Tani waa Sparta" remix technofest ayaa helay in ka badan 20 milyan oo views on YouTube.
Sababta oo ah caanka: vedio nac iyo riwaayado.
# 24. Epic guul daraysatay
Guul daraysatay waxaa caadi ahaan loo isticmaalaa sida falka, laakiin internet-ka sida magac loo isticmaalo taasoo la micno ah failure cajiib ah oo cayn qaar ka mid ah, si gaar ah waxay lid ku tahay guul, ama ku guuleysto. Sidoo kale waxa uu tilmaamay karo diidmada wax.
Youtube ayaa ku guul darreysato badan compilations video muujinaya dadka ku guuldareysteen inay wax ka qaban oo inta badan dhaawac ay sabab u tahay.
Sababta oo ah caanka: Ka gaabinta dadka.
# 25. Rux Harlem ayaa
"Harlem Rux" waa hees ka mid ah soo saare aan la garanayn Bauuer, ilaa afuufeen markii qaar ka mid ah caruurta Australian uploaded video ah naftooda 560, waxa uu. Markaas, waa taariikh meme.
Sababta oo ah caanka: Interesting song iyo qoob ka ciyaarka.
# 26. Rebecca Black - 'Friday' Music Video
Tani waa sameeyay 'xumaa music video' iyo 'song ugu xumaa', waxay ku andacoodaan in malaayiin dad ah. Laakiin this video waxa uu noqday arrin viral dunida.
Sababta oo ah caanka: daran iyo music song.
Tani waa World ah meme Warcraft gamer ee. In koox ka mid ah ciyaartoyda halis Leory uu yahay ciyaaryahanka si taxadar la'aan. Waxa uu caan ku tahay oohin.
Sababta oo ah caanka: qof oo xiiso leh Leory.
# 28. Gas saar karaoke kaftan
Tani waxay dhoola video jiraan waxa uu noqday kulaylka viral. In video faux this RATHER la Will iyo Monifa Sims bilaabo wada hadalka, laba macaamiisha California ilaa buuxinta gaaska ee ay minivan.
Sababta oo ah caanka: Wixii tayo aadanaha iyo ruux faafa.
# 29. Qosol Baby
Waxaan xitaa Uma maleynayo inaan u baahanahay si ay u sharxaan this mid ka mid ah, laakiin waxaan ku. Nin Swedish posted video ah oo uu ilmaha qosol dhawaaqa funny sida "Bing!" Waa la jeclaysto, sidaas sababta aan dadweynaha lahaa jeclahay.
Sababta oo ah caanka: nooc khaas ah oo qosol.
# 30. Leave Britney Kalidaa
Tani been abuur ah dareenka burburka video by Chris Crocker helay in ka badan 2 milyan oo views in labada saacadood ee ugu horreeya ka dib uploaded. Ka dib video ee Ciyaar, tiro ka mid ah jawaabaha, remixes lagu arkay dhammaan webka.
Sababta oo ah caanka: dareen Fake.
Top 25 YouTube Funny kanaalada si aad Day
52 YouTube Facts in yaabaa inaadan ogayn Laakiin ogaato
Sida loo soo dejinta YouTube in Pro Goo Final on Mac OS X (Yosemite ka mid ah)
Sida loo Download List YouTube URL
Sida loo RIP Audio ka YouTube
Top 50 Youtube Music gooldhalinta
Curation A Great 100 Funny YouTube Comments
Sida loo Ringtones ka YouTube Samee
Talinayo YouTube Music Channel ee Artists kala duwan, qaybaha iyo Wadamada
Sida dhaqsaha badan YouTube Downloader Alternative: Download Online Video Si fudud
Sida loo geliyaan Photos in YouTube
> Resource > YouTube > Top 30 YouTube Memes of All Time